Halkan Ka Akhriso: qayb ka mida Dhacdooyinkii ugu waawaynaa ee sanadkii tagay ka dhacay Somaliland. | Somaliland Mirror
Home WARARKA Halkan Ka Akhriso: qayb ka mida Dhacdooyinkii ugu waawaynaa ee sanadkii tagay ka dhacay Somaliland.
Halkan Ka Akhriso: qayb ka mida Dhacdooyinkii ugu waawaynaa ee sanadkii tagay ka dhacay Somaliland.
adminJan 02, 2019WARARKA0
Haragaysa(Somalilandmirror.com)- sanadkii tagay ee 2018 ayaan halkan ku xusaynaa qaar ka mida dhacdooyinka ugu waawaynaa ee Somaliland ka dhacay, ama siyaasada Somaliland ka dhacay.
– 6 January 2018, madaxweyne Biixi oo safarkii ugu horeeyey ku tagay dalka Jabuuti.
– 13 March 2018, xukuumada Somaliland ayaa gabi ahaanba ka joojisay shirkadaha isgaadhsiinta in lacagta Mobile lagu shubto aan lagu shuban Karin ama la isticmaali Karin boqol dollar wax ka yar, taas bedelkeedana loo bedelo shiling Somaliland si loo yareeyo sicir barar lacagta ku yimid.
– 22 March 2018, xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI ayaa soo jeediyey in la kala diro guddida doorashooyinka oo ay sheegeen in aanay ku kalsoonayn.
– 7 May 2018, Madaxweyne Biixi oo cafis madaxweyne ku siidaayey abwaan Niciima abwaan Qoranne oo xabsiga ku jirtay ka dib markii lagu eedeeyey inay arrimo qaranimadda ka dhan ah ku kacday.
– 20 May 2018, maxkamada gobolka Maroodi jeex oo saddex sanno oo xukun ah ku riday boqor Buurmadow.
– 26 May 2018, Duufaantii dabaylaha watay ee ka dhacday xeebaha Somaliland, ayaa waxa kormeer ku tagay Madaxweyne Biixi, isla markaana khasaarohii isagoo ka waramay yidhi. ““duufaanadii waxay dileen 49 qof oo toddobo qof ilaa hadda aan la hayn, waxa ku jiray shan caruur ah oo aan shan jir gaadhin, waxa dhaawacmay toddobaadan qof, sidoo kale 80% xoolihii way dhinteen.
– 18 June 2018, makhaayadaha Burco oo qaarkood xabsiga loo taxaabay ka dib markii ay kordhiyeen qiimaha shaaha. shacabka Burco ayaa qiimo kordhintaasi aad uga hor yimaadeen.
– 23 July 2018, ururka cilmi baadhista Soomaaliyeed ayaa shirkoodii ku qabsaday jaamacadda Hargeysa, taas oo ay iskugu yimaadeen aqoonyahano badan oo ka kala yimi meel kasta oo af Soomaali lagaga hadlo.
-15 August ,2018, golaha Guurtida Somaliland ayaa ka hor yimi xeerka kufsiga oo golaha Wakiiladu u gudbiyeen madaxtooyadda.
– 26 August 2018, Somaliland oo dib u celisay gaadiid badan oo lagala soo baxsaday deegaanka Soomaalida Itoobiya.
– 11 September 2018, Xukuumadda Somaliland ayaa la wareegtay haamaha shiidaalka ee Berbera.
– 25 September 2018, Cabdikariim Qalbi dhagax oo ka mid ahaa jabhadda ONLF ka muddana ku xidhnaa xabsi ku yaalla Itoobiya, ayaa Hargeysa booqasho ku yimi.
-30 September 2018, gudoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga KULMIYE Jaamac Shabeel ayaa xilkii iyo xubinimadii xisbiga laga saaray ka dib shir ay iskugu yimaadeen golaha fulinta ee xisbigaasi.
-11 Octobar 2018, wasaaradda arrimaha dibada Somaliland ayaa soo qabanqaabisay shirwayne lagaga hadlayo wixii 27 sanno u qabsoomay Somaliland iyo siyaasada arrimaha dibada Somaliland.
-12 November 2018, xukuumada Somaliland oo mamnuucday hoteeladii habeenkii lagu caweeyo ee fanaaniintu ka heesaan, waxaana loo qabtay wakhtiga ah 11:50 PM.
– 24 November 2018, madaxweyne Muuse Biixi oo markii ugu horeysay booqday ciidamada jiidda hore ee deegaanka Tukaraq.
– 28 November 2018, guddida doorashooyinka Somaliland oo shaaciyey in aanay doorashaddii ku qabsoomi Karin mudadii hore loogu cayimay.
– 12 December 2018 , xukuumada Somaliland oo mustaafurisay dad ajanab ah oo shaqooyin ka hayey Somaliland.
– 15 December 2018, magaaladda Hargeysa waxa yimid wefti madax dhaqameed ka socda qoomiyada Oromadda ee Itoobiya, Madax dhaqameedkaaasi ayaa sheegay inay usocdaan is dhexgalka labada bulsho ee Oromada iyo Somaliland, waxaanay xuseen in Somaliland tahay dhuunta ganacsigoodu soo maro.
– 17 December 2018, xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumada oo ku heshiiyey in aanay doorashaddu dhaafin sanadka 2019 mar hadii ay dib uga dhacday muddii hore loogu qorsheeyey ee march, 2019.
– 21 December 2018, madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku kulmay magaalada Wajaalle.
Previous PostJidadka Laamiyada Dhaadheer Ee London Oo Tooray( Mindiyo) La Isku Eryanayo + Dhimashada Iyo Dhaawaca Oo Xarad Beelay Next PostLix dal oo ku yaalla Badda Cas oo dhawaan samaystay xulufo, ayaa carbiskoodii u horreeyey ee millatari bilaabay.